Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeyb galay Madasha MAAN | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Aqoon Guud Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeyb galay Madasha MAAN
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeyb galay Madasha MAAN
Muqdisho (XT): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qeyb galay dood ay soo qabanqaabisay Madasha Aqoonyahanka Aragtida Nool (MAAN) oo ku saabsaneyd kaalinta dhallinyarada ee dowlad dhiska, dhibaatooyinka iyo caqabadaha waqtigaan haysta iyo qaabka wax looga qaban karo ayaa sheegay in dhallinyarada Soomaaliyeed laga doonayo in ay is abaabulaan si ay uga qeyb qaataan siyaasadda.
Madasha oo ay ka soo qeybgaleen dhalinyaro u badan aqoonyahanno, kuwo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada, Wasiirro iyo marti sharaf kale ayaa diiradda lagu saaray qoddobo badan oo ay ka mid yihiin, Siysaadda iyo Dhalinyarada, Qoondada Dhalinyarada ee Siyaasada Qaranka, Shaqa la’aanta dhalinta haysta, tahriibka iyo arrimo kale oo badan oo taabanayay arrimaha dhalinyarada.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasa Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay u badan yihiin dhallinyaro, ayna yihiin raasumalka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha waxa uu shegay in Soomaliya ay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto waddamada aduunka ugu dhalinyarada badan taasina ay ka dhigantahay in hoggaanka iyo talada dalka ay waxa ku yeeshaan si buu yiri ay isbadelka ay doonayaan qeyb uga noqdaan, talada dalkana samayn ku yeeshaan.
Madaxweynaha oo ka jawaabayay, mar wax laga weydiiyay ka qeyb galkan dhallinyarada ee siyaasadda iyo doorka ay ku leeyihiin go’aamada siyaasiga ah ee dalka lagu jahaynayo ayuu sheegay in dhallinyarada ay ku jiraan dowladda, ayna aad uga dhex muuqdaan
‘’Dhammaan Guddoomiyayaasha 17 degmo ee Gobolka Banaadir waa dhallinyaro sidookale Wasiiro xilalka haya Dowladda federaalka ah ayaa dhalinyaro ah.” Ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in arrimaha dhallinyarada iyo caqabadaha haysta ay dowlada ka war haysto, ayna markasta qorshaha ugu jirto inay wax qabato inta karaankeeda ah.
“ Toddobaadkaan waxaa kulan la yeelanay 15 xubnood ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxyabaha aan hordhignay oo aan kala hadlanay waxaa ka mid ah barnaamijyo iyo mashaariic lagu maalgalinayo dhallinyarada in ay dowladda ka gacansiiyaan ‘’.
Madaxweynaha ayaa xusay sidoo kale mar la waydiiyay arrimo la xiriir musuq maasuqa iyo eexda ka jirta Wasaaradaha Dowladda ayaa sheegay in markii uu talada la wareegayay shaqaalaha Dowladda ay ahayeen 1,200 ( Kun iyo Laba boqol), maanta ay gaarayaan 4,000 ( afar kun ) oo shaqaale dowladeed ah oo soo maray nidaamka shaqalaysiinta Dowladda. Waxa uu sheegay in ay adagtay in shaqaale inta Wasaaradda laga eryo kuwa cusub la qoro ,shaqaale kasta oo nidaamka shaqalaysiinta soo maraynay uu ku jiro Habraacada shaqaalaha ee Bangiga Dhexe ee Dowladda.
Madaxweynaha ayaa sheegay in arrimaha la xiriira wax isdaba marinta shaqaalaha iyo in mushhaarkooda la qaato aysan jirin hadii ay jirta aysan siddii hore aysan ahayn.
Madaxweynaha oo ka jawaabaya su’aalo ay waydiiyeen dhallinyaradii kasoo qeybgashay kulanka.
“Shaqaalaha dowladaa markii la shaqalaysiiyo waxaa laga qaadaa macluumaad xogtiisu dhamaystiran tahay oo Bangiga dhexe ku jirta , qofkasta oo shaqaale dowladeed oo sharciyaysan ahna meeshaas ayuu tagaa kaddib markii la hubiyo ayuu mushaarkiisa soo qaataa, siddaa darteed uma sahlana Wasiir inuu qofkii uu rabo eryo oo shaqale kale ku soo badelo’’. Ayuu raaciyay Madaxweynaha hadalkiisa.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa 70% shacabka Soomaaliyeed iyadoo caqabadaha iyo duruufaha ugu badan ay haystaan marka ay timaado fursahada shaqo, ka qaybgalka Siyaasada iyo ka dhex muuqasha hay’adaha dowladda iyo fagaarayaasha lagu gaaro go’aamada masiiriga ah ee dalka.
Agaasimaha Guud ee Madasha MAAN Cadiraxiim Cabdicasiis Aadan ayaa Xaqiiqa Times u sheegay in muhiimadda ay uga gol leyihiin kulamadan ay tahay in ay dhisaan buundada u dhaxeysa dhallinyarada iyo madaxda si loo helo jiil carbisan oo dhallinyaro ah kuwaasoo xog ogaalnimo laga dheehan karo aragtiyadooda.
“Madasha mar walba waxay ka shaqeyn doontaa isku xirka labada dhinac, waa qeybaha bulshada iyo madaxda qaranka. Hore waxaa nagala qeyb galay Wasiirrada Qorsheynta, Arrimaha Gudaha iyo Caafimaadka. Waan sii wadi doonnaa kulamada noocan oo kale ah si wacyiga bulshada ee dowladnimada sare loogu qaado.” Ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay Mudae Cabdiraxiim.
Previous articleDood ku Saabsan Qorshaha Qaranka oo Garoowe Lagu Qabtay
Next articleXubno Ka Socda Golaha Amaanka oo Muqdisho Yimid